13/09/2021 - ALANZAYAR
အမြင့်(51 CM) သာရှိပြီး ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး နွားအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ ဘဂ်လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက (23)လ အရွယ်နွားတစ်ကောင်
အမြင့်(51 CM) သာရှိပြီး ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး နွားအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ ဘဂ်လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက (23)လ အရွယ်နွားတစ်ကောင် ကမ္ဘာ့အသေးဆုံးနွားလေးဖြစ်တဲ့ Rani ဆိုတဲ့နွားလေးဟာ၊ဘဂ်လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကလယ်သမားတစ်ဦးရဲ့နွားပဲဖြစ်ပါတယ်။နွားလေး Rani ဟာ(23)လအရွယ်ရှိပီးအမြင့်(51cm)၊အလေးချိန်အားဖြင့် (28kg)သာရှိသာရှိပီး၊ အရွယ်လိုက်ဖွံ့ဖြိုးရမဲ့အရွယ်စားထက်ကိုသေးလွန်းတာကြောင့်အသေးဆုံးနွားလေးအဖြစ်နာမည်ကြီးနေပီး၊ Ranin လေးရဲ့ထူးခြားတဲ့အသွင်ပြင်ကြောင့်လာရောက်ကြည့်ရှူသူများနဲ့စည်ကားနေခဲ့ပါတယ်။ Rani ရဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့ယခုလိုအသေးဆုံးနွားကိုဘယ်နိုင်ငံမှာမှမတွေ့ဖူးမကြုံဖူးသေးတာမို့၊ Rani ကို Guinness World Records […]
Mytel နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်ရိုစီအောင်ပွဲကြမ်းပြီ….
Mytel နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်ရိုစီအောင်ပွဲကြမ်းပြီ Mytel က နင်တို့စောက်ဆံနဲ့ လုပ်ထားလို့တာဝါတိုင် ထိလို့ နာနေတာလားလို့ မအလ ကို ဒဲ့မေးလိုက်တဲ့ ဒေါ်ရိုစီအောင် အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို Mytel နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်ရိုစီအောင်ပွဲကြမ်းပြီ Mytel က နင်တို့စောက်ဆံနဲ့ လုပ်ထားလို့တာဝါတိုင် ထိလို့ နာနေတာလားလို့ မအလ […]
အသက်နှင့်မလိုက်အောင် အရွယ်တင်နုပျိုနေတာကြောင့် ကောင်လေးများကြားတွင် သမီးထက် အမေဖြစ်သူက ပိုပြီးရေပန်းစားနေသည့်အဖြစ်
အသက်နှင့်မလိုက်အောင် အရွယ်တင်နုပျိုနေတာကြောင့် ကောင်လေးများကြားတွင် သမီးထက် အမေဖြစ်သူက ပိုပြီးရေပန်းစားနေသည့်အဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကြင်ဖော်မဲ့မိခင်တစ်ဦးသည် အသက် ၄၀နှစ်အရွယ် ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် အရွယ်တင်ကာ နုပျိုချောမောလှပနေတာကြောင့် လူတိုင်းက သူမဧ။်အလှအပရေးရာ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိချင်နေကြသည်။ မိခင်ဖြစ်သူသည် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီး ကံမကောင်းစွာပဲ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် အမြဲလိုလို စကားအချေအတင်ဖြစ်ကာ […]
NUG အစိုးရ ထုတ်ပြန်ချက်
NUG အစိုးရ ထုတ်ပြန်ချက် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေတွေကို လိုက်နာရန်ကြိုးစားမယ်လို့ NUG အစိုးရ ထုတ်ပြန်ကြေညာ မြောက်ဒဂုံမှာ ရာအိမ်မှူးတစ်ဦး သေနတ်နဲ့ပစ်ခံရပြီးသေဆုံး ထားဝယ်မြို့မှာ အသက်မပြည့်သေးသူအမျိုးသမီးနှစ်ဦးအပါအ၀င် သုံးဦးကို စစ်ကောင်စီတပ်မှဖမ်းဆီး မြောင်မြို့နယ် ကျောက်ရစ်ကျေးရွာမှာ စစ်ကောင်စီတပ်က တစ်ရွာလုံးနီးပါး မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သတင်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့် ချင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး […]
ဘွဲ့ရသွားတဲ့ သမီးငယ်လေးကို ဂုဏ်ပြုချင်သောကြောင့် ကီလိုမီတာ၅၀၀ကွာဝေးသော ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမဆီသို့ ပန်းစီးလေးဖြင့် ရောက်အောင်လိုက်လာခဲ့သည့် ဖခင်
ဘွဲ့ရသွားတဲ့ သမီးငယ်လေးကို ဂုဏ်ပြုချင်သောကြောင့် ကီလိုမီတာ၅၀၀ကွာဝေးသော ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမဆီသို့ ပန်းစီးလေးဖြင့် ရောက်အောင်လိုက်လာခဲ့သည့် ဖခင် မိဘများအတွက် သားသမီးတို့၏အောက်မြင်မှုဟာ လူဘုံအလယ်တွင် ဝင့်ကြွားနိုင်သော ဂုဏ်ယူစရာပင်ဖြစ်ပေသည်။ယခုတွင်လည်း အသက်၇၁နှစ်အရွယ်ဖခင်တစ်ဦးသည် ဘွဲ့ရသွားသည့် သမီးအငယ်ဆုံးလေးကြောင့် ဂုဏ်ယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဖခင်ဖြစ်သူဟာ သားသမီး၆ယောက်ရှိနေခဲ့ပြီး သမီးအငယ်ဆုံးလေးကို ဘွဲ့ရသည်အထိ ကျောင်းထားပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမီးဘွဲ့ယူရတော့မည်ဟု ကြသိလိုက်ရသည်နှင့် ဖခင်ဖြစ်သူဟာ သမီးကျောင်းတတ်နေသည့် […]
ကံကောင်းချင်တယ်ဆိုရင် နေထိုင်ကျင့်ကြံသင့်တဲ့ နည်းလမ်း ( ၇ ) မျိုး
ကံကောင်းချင်တယ်ဆိုရင် နေထိုင်ကျင့်ကြံသင့်တဲ့ နည်းလမ်း ( ၇ ) မျိုး ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲကိုယ့်စိတ်ကို နှစ်ထားပါ သင့်မှာရှိတာ ပစ္စုပ္ပန်တခုထဲဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ အတိတ်ဆိုတာ ပြီးသွားပြီ အနာဂတ်ဆိုတာ မရေရာတာတွေနဲ့ မရောက်လာသေးပါဘူး သင့်လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မှ သင့်ဘဝကို ပြောင်းလဲနိုင်မှာ 2. Show kindness တပါးသူကို […]
မိဘတွေရဲ့ စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံရတဲ့ မွေးကင်းစသမီးလေးတစ်ယောက်ကို ထပ်မံမွေးစားလိုက်ပြန်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ……
မိဘတွေရဲ့ စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံရတဲ့ မွေးကင်းစသမီးလေးတစ်ယောက်ကို ထပ်မံမွေးစားလိုက်ပြန်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ…… ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ဒီနေ့မှာလည်း ကလေးတစ်ယောက်ကို ထပ်မံခေါ်ယူမွေးစားဖို့ လိုအပ်တာတွေ စီစဉ်နေခဲ့ပါတယ်။…. ကလေးကတော့ မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး ဝါးခယ်မဘက်မှာ မိဘတွေရဲ့ စွန်ပစ်ထားခြင်းကို ခံရကြောင်း ခိုင်နှင်းဝေကို ဆက်သွယ်လာတဲ့အတွက် မွေးစားဖို့ စီစဉ်နေခဲ့တာပါ။… ခိုင်နှင်းဝေကတော့ […]
အောင်မြင်တဲ့သူတွေ အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အရာ(၉)ခု
အောင်မြင်တဲ့သူတွေ အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အရာ(၉)ခု မိတ်ဆွေ အိပ်ရာမဝင်ခင် လုပ်လေ့ရှိတဲ့အရာတွေထဲမှာ အခုဖော်ပြထားတဲ့ အောင်မြင်သူ‌တွေ အိပ်ရာမဝင်ခင် လုပ်‌လေ့ရှိတဲ့အချက်တွေထဲက ဘယ်အချက်တွေကို လုပ်လေ့ရှိပါသလဲ? အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အောင်မြင်သူတွေ အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ လုပ်လေ့ရှိတဲ့အချက် တွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ (၁) စာဖတ်ခြင်း အောင်မြင်တဲ့သူ အများစုဟာ မအိပ်ခင်မှာ စာအုပ်စာပေ […]
လမ်းဘေးမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းပြီး ငယ်ငယ်လေးနဲ့ မိဘတွေကို ကူညီတက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်စရာ ဈေးသည်နှစ်ဦး
လမ်းဘေးမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းပြီး ငယ်ငယ်လေးနဲ့ မိဘတွေကို ကူညီတက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်စရာ ဈေးသည်နှစ်ဦး ပရိတ်သတ်ကြီးရေ လူ့ဘဝကြီးမှာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ရှင်သန်နေရပြီး ဝမ်းရေးအတွက်လည်း ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ထမင်းတစ်လုတ်အတွက် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြရပါတယ်နော်။ တစ်ချို့ကတော့ ဆင်းဆင်းရဲရဲ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရပြီး မိဘအပေါ်မှာလည်း အလွန်သိတတ်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာလည်း ကလေးနှစ်ယောက်က မိဘတွေအပေါ် သိတတ်စွာနဲ့ သူတို့တတ်နိုင်တဲ့ […]
ဘွဲ့ဝတ်စုံအပြည့်ဖြင့် လယ်တောထဲသို့သွားကာ မိဘများနှင့်အတူ ဂုဏ်ယူစွာ ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦး
ဘွဲ့ဝတ်စုံအပြည့်ဖြင့် လယ်တောထဲသို့သွားကာ မိဘများနှင့်အတူ ဂုဏ်ယူစွာ ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦး တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရပြီးသွားတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးဖြစ်သူ Jennifer Rocha ဟာ သူမရဲ့ဘွဲ့နှင်းသဘင်ဂါဝန်ဖြင့် သူမရဲ့မိဘများနှင့်အတူ လယ်တောထဲမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကာ မိဘများအား ဂုဏ်ယူစေခဲ့ပါတယ်။ Facebook ပေါ်ရှိ CaseQ မှတင်ခဲ့တဲ့ post တစ်ခုမှာ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် […]